... uxakekile kodwa uyonwabile-Geofumadas
... bexakeke kodwa bevuya
NgoDisemba, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kuninzi ekufuneka kwenziwe, ufuna ukuvala unyaka ngoxolo oluhle, kwaye uhambe zeholide noxinzelelo olungaphantsi kwe-2.5175. Ukulinda ixesha lokuqalisa kwakhona i-rumum ye-geofumar ebusuku.
Ukonwabela ulwaneliseko losapho oluninzi.
Ntombi yam, ukuthatha ithuba le-Ipad. Kuyahlekisa, wafunda ukuyisebenzisa phambi kwam, ngoku yingcali ethatha iinkukhu zaseFarmville kunye nomzobo ngeSketchbook. Into yokudlala emnandi, ukuba izicelo ezifanelekileyo ziyakhutshelwa.
Umama wam, ukonwaba ngokwenza iipuzzle angazange abenazo ebuntwaneni bakhe, nelifa elindishiyileyo ndizama ukulungisa izinto ezinzima kwaye intombi yam yafumana ithuba lokuchitha ixesha kunye.
Kwaye ke le ntshatsheli ugqibe isikolo sakhe. Ngokugqwesa kwizifundo kunye neminqweno emininzi ye-11 Janros yayo.
Unyaka onzima kuba kwafuneka afunde phantse eyedwa kwaye asinde ekugculekeni konyaka apho uninzi lwabantwana afunda nabo bayeka ukuba ngabantwana baba ngabaselula; ngokungaqini kwemvelo kunye nemveliso ehlekisayo yeengxaki zokuzithemba.
Yenzekile ekugqibeleni esikolweni, kulungile.
Ezi zidalwa zazalwa neqela lesizwe egazini, kunye nekhompyuter kwiminwe. Yayingunyaka onomdla wokubafundisa ukuba yintoni ekufuneka yenziwe kwaye ingenakwenziwa Facebook.
Kwaye isuphu enkulu yenkukhu, kunye neapile yetyuwa kunye ne-tortilla, kunye nokulula kunye nobubele babantu basemhlabeni. Ohhhh!
Post edlulileyo«Edlulileyo Yiyiphi i-Teamviewer - Eyona nto ibhetele ekuxhaseni kude
Post Next Icala ezilungileyo iPadOkulandelayo "
2 Uphendula athi “… uxakekile kodwa uyonwabile”
Oko ayilibaleki. Ifanelwe isithuba esithe ngqo, kuya kubakho ukhuthazo kweso sihloko.
Khumbula ukuba yayikwangunyaka apho intombazana yakho yafumana iphupha leyunivesithi ngenxa yenkxaso yayo.